होलिस्टिक एसईओ मा Koray Tuğberk Gübur संग साक्षात्कार - Ne gerekir?
लगइन दर्ता गर्नुहोस्
होलिस्टिक एसईओ मा Koray Tuğberk Gübur संग साक्षात्कार
प्राय: सोधिने प्रश्न SEO, होलिस्टिक र अर्थ शास्त्रीय SEO बारे
Holisticseo.digital को संस्थापक Koray Tuğberk Gübr का साथ अन्तर्वार्ता
श्री कोराइ वास्तवमै सबैभन्दा ज्ञानी र सफल व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन म होलिस्टिक एसईओमा चिन्छु। उनले स्थापना गरे समग्र एसईओ र डिजिटलसाइटमा अविश्वसनीय जानकारी प्रदान गरिएको छ। ऊ कहिलेकाँही लिंक्डइनमा काम गरिरहेको परियोजनाहरूको विकास प्रक्रियाहरू साझा गर्दछ। साइटहरुको अग्रिमता सफलताको स्तर अविश्वसनीय छ। उहाँलाई धेरै ठाउँहरूबाट भाषण दिन आमन्त्रित गरिएको छ, र उनले विदेश र देश भित्रबाट धेरै टोलीहरूबाट काम गर्न अनुरोधहरू प्राप्त गर्दछन्। स्पष्ट कुरा, तपाईंले के गरिरहनु भएको छ मतलब छैन। त्यसकारण तपाईंले लि definitely्कइनमा श्री कोरेलाई पक्कै पछ्याउनु पर्छ।
Koray Tuğberk Gübur विभिन्न केस स्टडीको साथ समय बर्बाद गर्न डराउँदैन। किन यो यति सफल छ। उहाँसँग धेरै प्राविधिक लेखहरू छन् holisticseo.digital मा। यदि तपाईं आफ्नो समय दिन तयार हुनुहुन्छ भने, धेरै मुद्दाहरूमा ज्ञानको अनुभव गर्न तयार हुनुहोस्।
Koray Tugberk Gugur:
पूर्ण नयाँ डोमेन नामको साथ days 33 दिन।
#SEO ढिलो हुनु हुँदैन। सामान्यतया मानिसहरूले सिक्न र बिस्तारै लागू गर्ने। यसैले म २ बर्ष पछि SEO परामर्श छोड्ने सोचमा छु।
नोट: यो साइटसँग सेमेन्टिक SEO गतिशीलता पनि छ।
स्पष्ट रूपमा, एसईओको बारेमा हाम्रो देशमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो गल्तीले एसईओलाई आवश्यक महत्त्व दिइरहेको छैन। ठिक छ, यदि हामी SEO कार्य गर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा कुरा गर्छौं भने;
हामी प्रश्न सोध्नु अघि के भन्छौं
तपाईलाई के लाग्छ सब भन्दा ठूलो SEO गल्तीहरू के हुन्छन्?
टर्कीमा एसईओ ईन्डस्ट्रीको पछाडि कारकहरू विश्वको पछाडि पछाडि तीन आधारभूत वर्गहरूमा विभाजित छन्। जबकि ती मध्ये एउटा अपेक्षाहरू र ग्राहकहरूका लागि विशिष्ट सम्भावित हो, अन्य दुई मुख्य कारणहरू यो हुन् कि एसईओ ईन्डस्ट्रीमा व्यक्तिहरू कठिन बक्सबाट बाहिर जान्छन् वा होइनन्, र ती मध्ये उनीहरूले सफलता प्राप्त गर्नमा केन्द्रित छैनन्। काम गर्नुहोस् र उनीहरूको कामलाई साँच्चिकै माया गर्दै, “नाम कमाउने र पैसाको प्रेम” जत्तिकै।
ग्राहक सम्भावित र ग्राहकको अपेक्षाहरू, जुन टर्की एसईओ उद्योगलाई पछाडि छोड्ने कारणहरू मध्ये पहिलो हो, अर्को शब्दहरूमा, ग्राहक प्रोफाइल तल वर्णन गरिएको छ।
ग्राहकहरूको एक महत्वपूर्ण अंश स्पष्ट एसईओ को मामला मा स्पष्ट बेवास्ता छन्।
डाटा विज्ञान, डाटा भिजुअलाइजेशन, सीमान्त आय (अव्यवसायिक प्रभाव) को अवधारणामा आधारित एसईओ आयको लागि प्रतीक्षा गर्न ग्राहकहरूको महत्त्वपूर्ण अंश धैर्यवान छैन।
ग्राहकहरूको महत्त्वपूर्ण अंशले अनिश्चितता सिद्धान्त, निर्णय-रूख, प्राकृतिक भाषा प्रशोधन, मात्रात्मक र Nitem जडानहरू (वेब ​​ग्राफ) जस्ता अवधारणाहरूलाई पहिचान गर्दैन। यस विन्दुमा, म तपाईंलाई सम्झना गराउँदछ कि यी अवधारणाहरू पनि वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्दा निर्णयहरू, सिक्ने, परिवर्तन गर्ने वा विचारहरू अघि बढाउँदा। अर्को शब्दमा, समस्या अधिक सामाजिक आयाममा सर्छ।
ग्राहकहरु को एक महत्वपूर्ण हिस्सा SEO सरल बनाउँछ। तिनीहरू खोज ईन्जिनको प्रकृतिबाट धेरै टाढा छन्।
ग्राहकहरूको महत्त्वपूर्ण अंशसँग उनीहरूको कुनै एसईओ आवश्यक्ताहरूको लागि पर्याप्त बजेट छैन।
ग्राहकहरूको एक महत्वपूर्ण अंश बैठक छोटो र संचार सटीक राख्नुको महत्त्वको मूल्यांकन गर्दैन।
ग्राहकहरूको महत्त्वपूर्ण अंशसँग समयको भावना हुँदैन।
एसईओको क्षेत्रमा भाग लिन धेरै ग्राहकहरू बिर्सिएका र लापरवाह छन्, जसलाई यसको लागि उच्च तालिका र प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ।
ग्राहकहरूको महत्त्वपूर्ण अंशले उनीहरूले काम गर्ने SEO हरूमा विश्वास गर्दैनन्, उनीहरूलाई सोध्छन् र कामलाई अझ गाह्रो बनाउँदछ।
ग्राहकहरूको महत्त्वपूर्ण अंशले एसईओ सम्बन्धित कार्यहरू र आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकता दिदैन।
अर्को शब्दमा, जो मानिस टर्कीमा एसईओ क्षेत्रमा काम गर्दछन उनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई धेरै ध्यान दिएर छान्नु पर्छ। माथिका वस्तुहरूमा परिणामहरू मात्र छन्, कारणहरू होइन। उदाहरण को लागी, धारा of को मुख्य कारण "SEO विशेषज्ञहरु का नाम र पैसाको प्रेम" संग सम्बन्धित छ, जो टर्की एसईओ प्रोसेसर (उद्योग) को विकास नहुनु को एक मुख्य कारण हो। त्यसकारण, एसईओ अपरेटरको स्थिति पनि एक एसईओ विशेषज्ञहरूको सामान्य व्यक्तित्वको कारणले हो, एक गोलाकार प्रभावको साथ।
दोस्रो कारण सबैभन्दा ठूलो र सब भन्दा साधारण हो। बक्स बाहिर जानु हुँदैन, परम्परागत र लिएको-को लागी अनुदानित सिलेबसहरु बाहेक कुनै अवधारणा वा विधि मान्यतालाई मान्यता दिदैन, प्रयास गर्न को लागी, ग्राहकलाई यसलाई प्रयास गर्न मनाउन, जोखिम लिन वा आवश्यकता महसुस नगर्न सिक्नुहोस्, जान्नुहोस् र महसुस गर्नुहोस्। तल टर्की एसईओहरूले गल्ती गर्ने मुख्य कारणहरू छन्, परम्परागत भन्दा बाहिर नजोडीएको र अनुमोदनको रूपमा लिइन्छ, र A / B जांच (परीक्षण) प्रदर्शन गर्दैन।
SEO एजेन्सीहरू र विभागहरूको योग्यताको अभाव।
ग्राहक "प्रश्न" र "अवलोकन" पद्धतिको लागि अधीर हुन्छन्, तत्काल परिणामको माग गर्दछ।
तथ्य यो छ कि एसईओ एजेन्सीहरू वैज्ञानिक सोच पद्धति र परम्पराबाट टाढा छन्।
ग्राहकहरूको भत्ता प्रयोगहरू गर्न पर्याप्त छैन।
एसईओको तर्फबाट भर्खरको अद्यावधिकहरू (राज्यको कला) अनुसरण गर्दै।
यी सबैभन्दा ठूला गल्तीहरू छन् टर्की एसईओ प्रोसेसरमा।
हामीले तपाईंको केहि लेखहरू पढ्यौं। अहिलेको लागि केहि यो ... किनकि तपाईको एउटा लेख पनि असंख्य जानकारीले भरिएको छ। हामी ती सबै पढ्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैनौं। त्यहाँ परियोजनाहरू छन् जहाँ तपाईं धेरै ज्ञात एसईओ विकास विधिहरू छोड्नुहुन्छ जस्तै प्रयोगकर्ता-अनुकूल डिजाइन, साइट गति, र सेमेन्टिक एसईओको साथ अविश्वसनीय जैविक आगन्तुकहरू प्राप्त गर्दछ।
यो विधा तर कम ज्ञात, उल्लेखनीय एसईओ के तपाईंसँग विधिहरू छन्?
पहिलो स्थान जहाँ सेमेन्टिक, अर्थात् प्रासंगिक खोज इञ्जिन (डेभर्जे) एट्रिमेन्टको नाम उल्लेख गरिएको थियो, सेर्गेई ब्रिनको हो डाटाबेसबाट सूचना निकाल्ने यो आविष्कार भनिने पेटेन्ट हो। सम्बन्धित आविष्कार १ 1999 0। को हो। त्यसकारण, गुगल खोज ईन्जिनमा लागू सबै कार्यकारी तर थोरै ज्ञात विधिहरू फेरि गुगलको आफ्नै पद्धति र आविष्कारहरूको सेटबाट उपलब्ध छन्। ती मध्ये एक एन्टिटी-एसोसिएसन हो, अर्को इन्टिटिभेशन हो। अर्को एउटा तरीका छ बार्नेकल एसईओ, जसलाई टर्कीमा "सर्पिल एसईओ वा वरपरको एसईओ" को रूपमा अनुवाद गर्न सकिन्छ। अर्को विधि भनेको "सउराउन्ड साउन्ड" को रूपमा उल्लेख गरिएको विधि हो। अर्को विधि "खोजी माग" सिर्जना गर्नु हो। मलाई एसईओ विशेषज्ञहरू छन् जसले "विन्दु", वा "आत्मविश्वास" र "प्रासंगिकता" मा Google को नौंफ ग्राफको लागि मेट्रिक्समा परिवर्तन समावेश गर्ने विधिहरूसँग रैंकिंग परिणामहरूको नापहरू जान्दछन्। त्यस्तै गरी, त्यहाँ बिभिन्न विधिहरू छन् जुन ० बाट पूर्ण रूपमा कृत्रिम कारण, "समानार्थी शब्द" र "शब्द व्युत्पन्न" र "क्वेरी नक्शा" को साथ सामग्री सिर्जना गर्दछ, जसले सामग्रीको फोकस अवधारणालाई उत्तम स्थान दिन्छ। यी विधिहरू कहिलेकाँही विशेष SEO A / B प्रयोग र अवलोकन समूहहरूमा साझेदारी गरिन्छ।
त्यहाँ पोष्ट-लिंक वा ब्याकलिink्कको सर्तमा समान स्थितिहरू छन्, तर यो विन्दुमा उल्लेख गर्न सम्भव छैन।
केहि कुञ्जी शब्दहरूको लागि हाम्रो स्तर निर्धारण गर्न हामी के गर्न सक्दछौं?
गुगलले यसको अघिल्लो लेखहरूमा भन्दछ कि त्यहाँ २०० भन्दा बढी र्याकिंग सिग्नलहरू छन्। २०२० मा, उनले यो संख्या "२००० भन्दा बढी" को रूपमा घोषणा गरे। जब यो मामला हुन्छ, यो भन्नु गलत हुनेछैन कि २००० भन्दा बढी विधिहरू अनुसरण गर्न सकिन्छ। तपाईंले पछ्याउन सक्ने विधिहरू पनि क्वेरीको प्रकार र "क्वेरी नक्शा" को आधारमा फरक पर्दछ। जे होस्, प्रतिस्पर्धी वेब डोमेनहरू (प्रतिस्पर्धी वेब साइटहरू) को प्रासंगिक वेब पृष्ठहरू अद्यावधिक गर्ने फ्रिक्वेन्सी, ती तरीकाले अद्यावधिक गरिन्छ, अनुरोधहरूको संख्या, अनुरोधहरूको आकार, प्रतिस्पर्धी नेटवर्क डोमेन द्वारा स्वामित्वमा रहेको अन्य शर्तहरूको निरीक्षण, लग फाइलहरूमा खोजी ईन्जिनबाट अनुरोधहरू, परिवर्तनहरू पछि खोज इञ्जिनको "क्रल"। ढिलाइ "र" अनुक्रमणिका ढिलाइ "नियन्त्रणहरू," आत्म-पूर्णता ", त्यो हो, स्वत: पूर्ण डेटामा परिवर्तनहरूको अनुगमन, प्रयोगकर्ता अनुभव परीक्षणहरू यसको आफ्नै उद्देश्य प्राप्त गर्न वेब पृष्ठको लागि प्रदर्शन गरिनुपर्दछ, र "वेब-ग्राफ", कि, जडान-अभिमुख परीक्षणहरू गर्नुपर्छ। यी सबै एक स्थिर राज्य मा प्रदर्शन गर्न गम्भीर कार्यबलको आवश्यकता छ, त्यसैले सफ्टवेयर ज्ञान एक SEO विशेषज्ञ को लागी एक ठूलो फाइदा हो।
गुगलका साथ राम्रा सर्तहरू राख्न हामी के गर्न सक्दछौं र हामी ध्यान दिन सक्छौं कि हामी एक राम्रो साइट हो?
गुगलले एक वेबसाइट शामिल गर्दैन, तर वेब क्वेरी (नेटवर्क इकाई) केहि प्रश्नहरू र शीर्षकहरूमा गणना गणनाको लागि। वेबसाइट केवल एक डोमेन नाम र यसको पछाडि सर्भर हो। अर्कोतर्फ, वेब इकाईमा नेटवर्क डोमेन नाम आफैंमा संस्थापक, प्रायोजक, कर्मचारी, लेखक, शीर्षक, स्थापना मिति, सामाजिक मिडिया खाताहरू, अन्य नेटवर्क क्षेत्रमा स्मारकहरू सम्बन्धित छ। अर्को शब्दहरुमा, यदि तपाइँसँग एक धेरै राम्रो वेबसाइट (नेटवर्क डोमेन) छ भने पनि, यो सम्भव छ कि तपाइँ राम्रा दर्जा पाउनुहुन्न।
यसलाई रोक्नको लागि, तपाईंले एक होलिस्टिक एसईओ व्यवस्थापन गर्नु पर्छ जुन परम्परा बाहिरको ब्रान्ड-अस्तित्वको प्रत्येक पक्ष र प्रतिबिम्बमा केन्द्रित हुन्छ, परम्परागत एसईओ दृष्टिकोणको सट्टामा मात्र "डोमेन नाम" मा केन्द्रित हुन्छ, त्यो वेबसाइट हो। । यो ज्ञात छ कि एफिलियट मार्केटिंगमा आधारित "एफिलियट" मोडलहरूमा, YouTube च्यानल स्वामित्व खोज परिणामलाई असर गर्छ र अधिक "प्रासंगिकता", "विश्वास" स्कोर दिन्छ "निकाय" लाई। गुगल जस्तै, युट्युब अनुहार, आवाज, दृश्य पहिचान र स्क्यानिंग प्रणाली आफ्नै डाटाबेसमा रेकर्ड गर्दछ।
तपाईंले एल्गोरिथ्म ज्ञानको साथ समग्र एसईओ दृष्टिकोणको क्राउन आवश्यक छ। हामी दुवैलाई उनीहरूको प्याटेन्टहरू (आविष्कारहरू) र उनीहरूको आफ्नै बयानहरूबाट थाहा छ जुन गुगलले "नियम-आधारित एल्गोरिदम" बाट "डीप लर्निंग" प्रणालीमा पूर्ण रूपमा बदल्दछ। मेशिन शिक्षा र डीप लर्निंगको प्रत्येक ज्ञान डाटा विज्ञान र दृश्यको साथ एसईओ विशेषज्ञको लागि गुगलको व्यवहार र छनौटहरूको वर्णन गर्न मद्दत गर्दछ।
मूर्त रूप लिनको लागि, तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरू (प्रतिस्पर्धीहरू) बढि सोशल मिडिया (सोशल प्रेस) गतिविधि देखाउनुहोस्, बज फ्याक्टर बनाउनुहोस्, ब्रान्ड जस्तो कार्य गर्नुहोस्, वेबसाइट होइन, इन्टरनेटको सबै सतहहरूमा र तपाईंको आफ्नै व्यवसायमा उपस्थित हुनुहोस् (उद्योग) ) तपाईंले सबै राम्रो र नराम्रो उदाहरणहरू हटाएर वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ।
यसैले, तपाईंसँग कति सामग्रीहरू छन्, कस्तो प्रकारको "स्क्रोल गहराई" चाहिन्छ, डोमेनमा आन्तरिक लिंकहरूको कुल स number्ख्या, प्रति शर्त आन्तरिक लिंकहरूको संख्या (पृष्ठ), एch्कर पाठ जुन सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्दछ, डोमेन नाम र डिजाइन सिद्धान्तहरू अपडेट गर्ने फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्न यो सम्भव छ।
यो प्रश्न उनमा आउनुहोस् जसले प्लेटफर्ममा साइट स्थापना गर्न चाहान्छन् जस्तै WordPress, Wix, जहाँ साइट बिना कोड निर्माण गर्न सकिन्छ।
जो एक ब्ल्ग साइट वा ई-वाणिज्य साइट सेटअप गर्दछ, तपाईको लागी कुन प्लेटफर्ममा SEO को मामला मा अधिक लाभदायक उपकरण छ? त्यो किन हो?
र सबैभन्दा पहिला, म तपाईंलाई दृढताका साथ सुझाव दिन्छु कि तपाईं आइडियासफ्ट, स्सोफ्ट, टिकिमेक्स र कुनै पनि तयार ई-वाणिज्य प्रणाली प्रदायकबाट टाढा रहनुहोस्। यदि तपाइँको लक्ष्य तपाइँको उद्योग (प्रोसेसर) हावी गर्न (दबाउन) छ भने, तपाइँ यी प्रणाली प्रदायकहरूको साथ यो गर्न सक्नुहुन्न। यो केवल मैले उल्लेख गरेको कम्पनीहरूको लागि मात्र होईन, तर सफ्ट, म्याक्स र समान शीर्षकहरूमा अन्त्य हुने सबै कम्पनीहरूको लागि पनि यो सत्य हो।
यस सन्दर्भमा, म मेरा तीन ग्राहकहरूको परियोजनाहरू व्यवस्थापन गर्दैछु, जसका साथ दुर्भाग्यवस म अझै पीडित छु। यस प्रकारको भुक्तान गरिएको प्लेटफर्महरूमा, ठूला र राष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि दिनको अन्त्यमा यी प्रकारका प्लेटफर्महरूका मालिकहरूसँग बाध्य छन् र उनीहरूले ठूलो लागत र समय घाटा उठाउनु पर्दछ। यस फाराममा आवश्यकताहरू पूरा गर्न समान खर्च (लागत) मा एक भित्री विभाजन स्थापना गरेर ठूलो बजेट परियोजनाहरूका लागि उपयुक्त उपयुक्त छ।
यदि तपाईंको लक्ष्य एक सानो ई-वाणिज्य साइट तपाईंको आफ्नै सेट अप गर्नु हो भने, वर्डप्रेस र WooCommerce वा शॉपिफाई उत्तम र उपयुक्त छन्। यसको लागि पहिलो कारण हाम्रो देशमा पीएचपी विकासकर्ताहरूको पर्याप्तता हो। यसैले, तपाईं अझै पनी आफ्नो नेटवर्क-डोमेनमा तपाईंको विशेष अनुरोधहरू लागू गर्ने मौका हुनेछ।
अर्को फाइदा भनेको तिनीहरूसँग निःशुल्क प्लगइनहरूको विशाल विविधता हो। Wix दुबै प्लग-इन विविधता र स्वामित्व सफ्टवेयर समर्थनमा अभाव हुने छ किनकि यससँग पर्याप्त व्याप्ति छैन। त्यस्तै गरी, शिपिफाई एक प्लेटफर्म हो जहाँ साधारण प्लगइन (अनुप्रयोग) शुल्कको लागि बेचिन्छ, र दुर्भाग्यवस, अनुकूलन यूआरएल संरचना पनि निर्धारित गर्न सकिदैन।
तसर्थ, यो व्यक्तिसँग उत्तम विकल्प हो जुनसँग WordPress र WooCommerce सफ्टवेयर ज्ञान छैन। यद्यपि मेरो मुख्य सिफारिश भनेको उनीहरूले सफ्टवेयर सिकेर हेडलेस सीएमएस (हेडलेस सामग्री प्रबन्धन प्रणाली) मा विशेषज्ञता प्राप्त गरे, र तिनीहरू आवश्यक रूपमा यस वर्गका उदाहरणहरूमा निर्भर हुँदैनन्। यस बिन्दुमा, GatsbJS र GraphQL वा Jekyll मेरो सिफारिशहरू हुन्।
यो त्यस्तो चीज हो जुन हामी मध्ये धेरैजसोलाई अनिश्चित छ।
सुरुमा नक्कल सामग्रीको साथ साइट भर्न र त्यसपछि मूल सामग्रीको साथ जारी राख्न, वा पूर्ण रूपमा मूल सामग्रीको साथ सुरू गर्न र ठोस, यद्यपि भारी, सामग्रीको साथ जारी राख्नको लागि स्वास्थ्यकर छ? त्यो किन हो?
Google ले "क्लस्टर" मा समान सामग्री समावेश गर्दछ। क्लस्टर भित्र सब भन्दा बलियो स्रोतबाट सामग्री "Represantative" को रूपमा चयन गरिएको छ। प्रत्येक पछिल्लो समान प्रतिनिधित्वको लागि "क्यानोनासिलिस" हो। यसलाई लिंक इन्भर्सन भनिन्छ। अर्को शब्दमा, कुनै पनि नक्कल वा समान सामग्रीले प्रतिनिधि सामग्रीलाई अझ बढी आधिकारिक बनाउँछ। लिंक इनभर्जन प्रभाव प्राप्त गर्न, यो बीज डोमेन हुनु आवश्यक छ। यी सबै अवधारणाहरू, एक अर्थमा, टर्कीको लागि विदेशी हो, र स्पष्टसँग विदेशमा विदेशमा। तसर्थ, यसलाई टर्कीमा "अनुवाद" गर्न धेरै गाह्रो छ।
तल, तपाईं एक उदाहरण देख्नुहुनेछ।
आउनुहोस् दुई भिन्न परिदृश्यहरू (फिक्शन) लाई तल विचार गर्नुहोस्।
पहिलो वेब-डोमेनसँग पूर्ण रूपमा मौलिक सामग्री छ। प्रासंगिक विषय पूर्णमा पावर (अधिकार) हुनको लागि यसलाई कुल 450० सामग्री चाहिन्छ। 450० सामग्रीमा, औसत "१०-१-10" आन्तरिक लि and्क र २०-२15 "एन्टिटीहरू", नाम नामक संस्थाहरू हुनुपर्छ। यी सबै मुद्दाहरूलाई निर्दिष्ट रूपमा ठ्याक्कै लेख्न यो धेरै लामो समय लिने छ, र ड्राफ्ट (प्रोजेक्ट) पूरा नभएसम्म नेटवर्क-डोमेन नाम यसको क्षेत्रको अधिकार (शक्ति) हुनेछैन।
अब एक परियोजना विचार गर्नुहोस् जुन एक प्रतिलिपि र एक मूल सामग्रीको साथ with450० अलग सामग्री पूर्ण गर्दछ। वा, एक प्रोजेक्ट विचार गर्नुहोस् जुन १० विभिन्न स्रोतहरूबाट 450० अलग सामग्री तान्दछ। यदि तपाइँ खोज इञ्जिन (डेभर्जे) को संस्थापक हुनुहुन्छ भने तपाइँ के सोच्नुहुन्छ? लोकप्रिय विश्वासको विपरित, "उपयोगी सामग्री" Google को लागि महत्वपूर्ण छ, "मूल" सामग्री होईन। धेरै समाचार साइटहरू गुगल डिस्कवरीमा उनीहरूका प्रतियोगिहरूबाट सामग्री प्रतिलिपि गरेर समावेश गर्न सकिन्छ। धेरै ब्ल्याकहेटरहरू गुगलको आँखामा सामग्रीको मूल मालिक परिवर्तन गर्न सक्षम छन्, यसलाई सामग्री अपहरण भनिन्छ (थप वर्णन गरिनेछ)।
त्यसकारण, "क्यानोनिकल बग" को समयमा जुन गुगलले सेप्टेम्बर २०२० पछि अनुभव गरेको थियो र फेब्रुअरी २०२० सम्म प्रभावहरू छन्, धेरै वेबसाइटहरू (वेब-डोमेन) जीएससी खातामा, यूआरएल निरीक्षण उपकरण, "क्यानोनियलाइज्ड" वेब-बेट्सका लागि बिभिन्न वेब-डोमेनबाट। URL निरीक्षण गरियो। "मूल मूल पृष्ठको रूपमा देखाईरहेको थियो।
वास्तवमा, यो प्रश्नले निम्न कुरा पनि उठाउँदछ;
हामी कसरी पहिलो चरणको कठिनाइहरू हटाउन सक्छौं? हामीले कुन मार्ग अनुसरण गर्नुपर्छ?
म मेरा धेरै ग्राहकहरु लाई भन्छु, दुर्भाग्यवश, कि एसईओ अब एक अर्थमा लक्जरी भएको छ। यो किनभने एसईओ मा खोज ईन्जिन (खोज इञ्जिन-डेभर्जे) ले भन्छ र भन्न सक्दछ भन्दा धेरै समावेश गर्दछ, र एसईओ आफै यसलाई गहिरो र गहिरो हुन्छ यसलाई विभिन्न ठाडोहरूमा विभाजन गरेर।
विगतमा, एक एसईओ एक परियोजना को लागी पर्याप्त थियो, तर अब एक परियोजना को लागी maybe अलग SEO चाहिन्छ। होलिस्टिक एसईओ र डिजिटलमा, यो किनभने प्रत्येक ग्राहक शिक्षित छ, ज्ञान यहाँ साझा जोखिम र कठिनाइ कम गर्छ, र परियोजना को लागी वफादारी।
यस सन्दर्भमा, निम्नलिखित कुराहरू जुन तपाईले प्रत्येक परियोजना अघि गणना गर्नु पर्छ।
कति पृष्ठहरु (शर्त) तपाईं हुनेछ?
तपाईंको कतिवटा सेगमेंटहरू (सेक्सन) हुनेछ?
पृष्ठ प्रकारले कति अनुरोधहरू फेला पार्नेछ?
कुन संरचना र विधिहरू अगाडि र पछाडि प्रयोग गरिनेछ?
कति लेखक र सामग्री सम्पादक तपाईंलाई आवश्यक हुनेछ?
ब्रान्डिंग प्रक्रियाको क्रममा कति लिंकहरू, लेखहरू, र कुन नेटवर्क (व्यवसाय नेटवर्क) को आवश्यक हुन्छ?
प्रति पृष्ठ कति वटा आन्तरिक लिंकहरू हुनेछन्?
पृष्ठ डिजाइन तत्त्वहरू, ब्रान्ड रंगहरूको बारेमा के हुन्छ?
तपाई कति दिन प्रति पृष्ठ प्रकाशित गर्नुहुन्छ?
प्रति पृष्ठ जितेका प्रश्नहरूको मात्रा कति हुनेछ?
यदि तपाईं यहाँ १० एसईओ प्रोजेक्ट स्टार्टअप प्रश्नहरूको उत्तर अग्रिम हुनुहुन्छ भने, तपाईं निराश हुन सक्नुहुन्छ। तपाईंको प्रतिस्पर्धी तपाईं भन्दा उच्च ब्रान्ड शक्ति हुन सक्छ, तिनीहरू अधिक ज्ञात हुन सक्छ, तर यसको मतलब तपाईं तिनीहरूलाई हराउन सक्दैन। एसईओ को प्रकृति ग्रोथ ह्याकि। हो। अर्को शब्दहरुमा, तपाईसँग जुन जुन यो परियोजना लाई बढ्नको लागि लिन्छ जो गर्न को लागी जोश हुनु पर्छ।
म Koray Tuğberk GÜBÜR हो, र मँ सम्पर्क गर्न को लागी Negerekir.com टीम लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिमेन्टिक, वा प्रासंगिक एसईओको दायरा भित्र, म मेरो उद्योगमा शब्दहरू तुर्कीमा सकेसम्म मैले जवाफ दिए प्रत्येक प्रश्नमा अधिक अनुवाद गर्न चाहन्थें। यस बिन्दुमा तपाईलाई अनौंठो लाग्न सक्छ, तर मेरो आफ्नै पेशाको प्रभावका कारण र मैले व्यवस्थापन गर्ने धेरैजसो परियोजनाहरू विदेशी हुन् भन्ने तथ्यले मेरो टर्की धेरै बिग्रिएको छ। यस सम्बन्धमा, मैले हालसालै प्राप्त गरेको चेतावनीको प्रभावमा मैले सकेसम्म योगदान पुर्‍याउन चाहेको छु। यद्यपि अ international्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य छ, हामी हाम्रो आफ्नै भाषाको रक्षा गर्न चाहन्छौं र यसको अर्थपूर्ण सम्बन्धमा हिड्न सक्षम हुन चाहन्छौं।
Koray Tuğberk Gübur को असाधारण केस मध्ये एक
यदि तपाईं खोज्नुहुन्न भने तपाईं के खोजिरहनु भएको छ
SEO मा Ayhan Karaman संग साक्षात्कार
हामी तपाईंको लागि एसईओ को बारे मा Ayhan Karaman साक्षात्कार। मुख्य;
SEO पुस्तक र सेवाहरू
याद गर्न को लागी
Ne Gerekir यसको शुद्धता पुष्टि भयो।
रोबोटिक्स इन्जीनियरिंग 🦾 मा मनिर टर्कसँग अन्तर्वार्ता
घरेलु उत्पादन रोबोटिक हात उत्पादन परियोजनाका मालिक मनिर टर्कसँग अन्तर्वार्ता। मुख्य;
यो को हुनु पर्छ?
SEO के हो? 💻 हामी नि: शुल्क एसईओ विश्लेषण प्रदान गर्दछौं 🎁
हाम्रो लेख सब भन्दा विस्तृत छ SEO के हो? मुख्य;
SEO भनेको के हो?
SEO प्रक्रियामा के समावेश छ?
Koray Tuğberk Gübur अन्तर्वार्ता
आयहान करमण साक्षात्कार
नि: शुल्क SEO विश्लेषण
Elzel Argül यसको शुद्धता पुष्टि भयो।
एक ई-कमर्स साइट स्थापना गर्नु अघि पढ्नुहोस् Read
हाम्रो लेखले घरमा ई-कमर्स साइट कसरी सेट अप गर्ने भन्ने बारे जानकारी राख्छ। मुख्य;
Ne gerekir सूची
विज्ञापन र सोशल मीडिया
कर र एक कम्पनी स्थापना
भर्चुअल पोष्ट र कार्गो
हाम्रो लेखको प्रायोगिक व्याख्या
विशाल सूचना प्लेटफार्म
क्यामरन मूर | 🇨🇿
11/06/2021 at 14:20 - जवाफ दिनुहोस्
हे! मँ तपाईंलाई सोध्न चाहान्छु कि तपाईसँग ह्याकर्सको समस्या छ कि छैन?
मेरो अन्तिम ब्लग (वर्डप्रेस) ह्याक गरियो र मैले कुनै ब्याकअप नभएकोले केही महिना कडा मेहनत गरें।
तपाईंसँग ह्याकरहरू रोक्न कुनै विधि छ?
Ne Gerekir | ।।
11/06/2021 at 21:46 - जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते क्यामरन! मलाई माफ गर्नुहोस् तपाईंले यस मार्फत जानुभयो। म कल्पना गर्न सक्छु कि तपाईंले कस्तो महसुस गर्नुभयो
यदि सुरक्षा ठोस छैन भने, यो वास्तवमा निन्दनबाट वञ्चित गर्ने मुद्दा हो। हामीले धेरै आक्रमणहरूको सामना गर्यौं। भाग्यवस, हामी एक साथीलाई भेट्यौं जसले हामीलाई सँधै सुरक्षित महसुस गराउँथ्यो। उनले धेरै आक्रमणहरूको लागि सावधानी अपनाए र तिनीहरूको नियन्त्रण सुनिश्चित गरे। हामी आरामदायी निद्रामा छौं। म उसलाई बताउनेछु ताकि उसले तपाईंको लागि विज्ञ टिप्पणी दिन सक्छ। यसले छोटो समयमा तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
मास्चेरा | 🇹🇷
11/06/2021 at 22:04 - जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते क्यामेरून। सबै भन्दा पहिले, मलाई तपाईको खराब अनुभवको लागि माफ गर्नुहोस्। हाम्रो WordPress- आधारित साइटहरू वास्तवमै सधैं खतरामा हुन्छन्। यस कारणका लागि, हामीले सेवा सुरू गर्नु अघि सबै आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाउनु पर्छ।
केवल सूचीकृत गर्न:
१- प्रणाली सुरक्षा
२- फाइल सुरक्षा
- HTTP हेडर सुरक्षा
यसले आधारभूत र महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टहरू समावेश गर्दछ
यदि तपाईंलाई यससँग थप मद्दतको आवश्यकता छ भने, म व्यावसायिक समर्थन प्रदान गर्न सक्छु।
➡️ म तपाइँको वेबसाइट मा साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्दछ।
💻‍💻 मेरो बारे
उत्तर लेख्नुहोस्जवाफ रद्द
आफ्नो इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिनेछ। आवश्यक क्षेत्रहरू * तिनीहरू संग चिह्नित छन्
मेरो नाम, ईमेल ठेगाना, र वेबसाइट ठेगाना सुरक्षित गर्नुहोस् यस ब्राउजरमा अर्को पटक टिप्पणी गर्दा।
शिक्षा र संचार
घर र बगैचा
व्यक्तिगत हेरचाह र शैली
घरपालुवा जनावर र जनावरहरू
कार र अन्य सवारी
प्रश्न खोजी गर्नुहोस्
२० विचारको साथ तपाईंको जीवनसाथीसँग घरमा राम्रो समय लिनुहोस्
तपाईंको बच्चासँग घरमा २ 27 विचारहरूको साथ राम्रो समय बिताउनुहोस्
यसले के लिन्छ भनेर पत्ता लगाउन
Ne Gerekirहेर्नु पर्छ!
होलिस्टिक एसईओ मा Koray Tuğberk Gübur संग साक्षात्कार 30 / 05 / 2021
SEO मा Ayhan Karaman संग साक्षात्कार 30 / 05 / 2021
SEO के हो? 💻 हामी नि: शुल्क एसईओ विश्लेषण प्रदान गर्दछौं 🎁 30 / 05 / 2021
२० विचारको साथ तपाईंको जीवनसाथीसँग घरमा राम्रो समय लिनुहोस् 17 / 05 / 2021
मुटुको दौड भएको मानिसलाई कसरी खुवाउनु पर्छ? १ जवाफ - १ भोट
महामारीको अवधिमा हामी कसरी स्वस्थ खाने छौं? १ जवाफ - १ भोट